Baadi goob balaaran oo ka socda Badda Madow kadib burburkii diyaarada Ruushka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBaadi goob balaaran oo ka socda Badda Madow kadib burburkii diyaarada Ruushka
December 26, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Baadi goob weyn oo ka socda Badda Madow kadib burburkii diyaarada Ruushka. [Sawirka: Twitter]
Moscow-(Puntland Mirror) Kooxaha badbaadada oo ay taageerayaan Maraakiib iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa baadi goobaya dadkii ku waxyeeloobay kadib markii diyaarad Ruushku lahaa oo ay saarnaayeen 92 qof oo ku socotay Suuriya ay ku burburtay gudaha Badda Madow wax yar kadib markii ay duushay.
Dhammaan rakaabkii diyaaradaas oo u badnaa ciidamamada muusikada Ruushka iyo suxufiyiin ayaa la aaminsanyahay in ay dhinteen.
Diyaarada ayaa kusii jeeday saldhiga Ruushka uu ku leeyahay gudaha Suuriya ee Latakia, waxayna siday 81 qof oo rakaab ah iyo 11 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa, sida ay ku warantay wakaalada wararka Ruushka ee Interfax.
Diyaarada ayaa nooceedu ahaa Tu-154, oo ahayd saddex matooray ay sameeyeen Midowgii Soofiidka.
Baadigoobayaasha ayaa sidoo kale raadinaya sanduukha madow ee duuba codadka diyaarada si loo ogaado waxyaabaha sababay shilka.